DOORASHADA GUDDOOMIYAHA CUSUB EE FARACA DHARKENLAY 2018 – Hope Generation – جيل الأمل
Kulan si heer ah loosoo agaasimay, oo ay isugu yimaadeen Xubnaha Faraca degmada Dharkaynley iyo kor joogto ka kala socotay labada gole ee Urur ka Ee Golaha Dhexe iyo golaha fulinta, ayaa ka qabsoomay Hotel Istanbul Ee Magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa Doorashada gudoomiyaha cusub ee Faraca degmada Dharkaynley kadib markii ay dhamaatay muddo xileedkii gudoomiyihii hore ee faraca Mudane C/samad Maxamed Sheekh.
Ugu horayn kulanka waxaa daah furay Gudoomiyaha guud ee Ururka Jiilul Amal, Mudane Maxamed Barawaani oo ka sheekeeyay Ahmiyadda ay leedaha doorashada iyo in dadku ay hogaankooda doortaan, isagoo sidoo kale mahadcelin balaaran u jeediyay Maamulkii iyo xubnihii firfircoonaa ee faraca dharkaynley ka soo shaqaynayay muddadii sanadka ahayd, wuxuu hogaanka cusubna u rajeeyay inuu ilaahay la garab galo hawsha culus ee hortaala, isagoo xubnaha faraca na ka codsaday inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub.
Intaa ka dib waxaa kalmado kookooban la siiyay xubnaha ka kala socday labada gole ee doorashada kor joogtada ka ahaa.
Intaa kadib waxaa la gudo galay doorashadii waxaana codka oo qarsoodi ahaa markii la tiriyay ka dib 8 cod ku guulaystay Mudane #MaxamedNuur oo ka mid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee mudadii sanad ka ahayd ka soo shaqaynayay Faraca Degmada Dharkeynley.
Kalmadii gudoomiyaha cusub ayuu ugu mahadceliyay dhamaan xubnihii codkooda siiyay iyo sidoo kale dhamaan inta goobjoga ka ahayd kulanka, wuxuuna balan qaaday in intii karaankiisa uu ku dadaali doono inuu ka shaqayn doono sidii loo hirgalin lahaa hawlaha Jiilul Amal ee ku aadan faraca dharkaynleey, sidoo kalena waxaa uu balan qaaday inuu kaashan doono dhamaaan xubnaha faraca, iyo maamulkii hore ee Faraca.
Ugu danbayntii Waxaa kalmaddiisa Jeediyay Gudoomiyihii hore ee Faraca Mudane C/samad Maxamed Sheekh oo ka warbixiyay mudadaas sanadka ah waxyaabihi u qabsoomay, sidoo kalena balan qaaday inuu la shaqayn doono hogaanka cusub.
Gabagabadii Waxa kalmado tahniyad ah u diray, gudoomiyaha cusub xubnihii kulanka ka soo qaybgalay uguna duceeyay inuu ilaahay u fududeeyo xilka culus ee loo igmaday.